DEG DEG: Weerar dad lagu dilay oo ka dhacay Shabellaha Hoose – AfmoNews
DEG DEG: Weerar dad lagu dilay oo ka dhacay Shabellaha Hoose
Weerar hubeysan ayaa goor dhow ka dhacay wadada xiriirisa Degmooyinka Afgooye iyo Wanlaweyn ee Gobolka Shabellaha Hoose, ka dib markii maleeshiyada Al Shabaab ay weerareen gaadiid siday dhuxul.
Maleeshiyada Al Shabaab ayaa beegsaday gaadiidkan, xilli ay ku sugnaayeen kontorool ku yaala halka lagu magacaabo Tabeelaha Maama Caliyow. Kontoroolkan waxaa maamula oo gacanta ku haya maleeshiyaad deegaanka.
Wararka ayaa sheegaya in dagaal hubka noocyadiisa kala duwan leesku adeegsaday uu ka dhacay deegaankaasi, isla-markaana uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh.
Ugu yaraan shan qof oo odayaal ay ku jiraan ayaa lagu dilay weerarka, halka tiro kalena lagu dhaawacay. Ilo wareedyo ayaa Dhacdo.com u sheegay in khasaaraha uu intaasi ka badan karo.
Ujeedada Shabaabka ayaa ahaa inay gubaan gaadiidkaasi oo dhuxusha u waday Gobolada Baay iyo Bakool, ganacsato deegaankana ay u rarnaayeen.
Shabaabka hubeysan ee dalka ka dagaalama ayaa billihii ugu dambeysay soo rogay awaamiir ay ganacsatada iyo gaadiidleydaba uga diggayaan inaanay wax ganacsi ah gayn karin deegaanada Koonfur Galbeed.
Maleeshiyada Al Shabaab ayaa marar badan gaadiid u rarnaa ganacsato Soomaaliyeed ku gubay deegaanada ku dhow dhow Tabeelaha Maama Caliyow. Wariye-yaashana waxay soo sheegayan in wadadaan oo aanay joogin Ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom ay qarka u saaran tahay inay go’do.